Kumuu ahaa basaasihii Aldrich Ames? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Aqoon Guud Kumuu ahaa basaasihii Aldrich Ames?
Kumuu ahaa basaasihii Aldrich Ames?
Aldrich Ames wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan hey’ada sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. Wuxuu si qarsoodi ah ula shaqeeynayey sirdoonkii Midoowga Soofiyeeeti ee KBG.
Wuxuu dukomentiyo iyo macluuumad badan oo ku saabsan xukuumadda Washington iyo qorshaheeda caalamka u si qarsoodi ah ugu gudbin jiray sirdoonka Soofiyeet-ka muddo sagaal sanno ah. Sheekada ku sabasan inuu basaaso u noqdo sirdoonka Soofiyeet-ku waxeey bilaabatay markii ay kala tageen gabadhii uu qabay oo asal ahaan u dhalatay Kolombiya. Kala tagoodu wuxuu sababay in deyn badan lugu yeesho, taasoo mushaarka uu ka qaadan jiray CIA-da ku filaan weeysay. Wuxuu ku fekaray inuu bankgi dhaco si uu iskaga bixiyo deyn kor u dhaaftay konton kun oo doolar oo kala tagoodu loo nisbeeynayo ineey sabab u tahay. Lix bilood ka dib markii uu xal u heli waayey deynta iyo qarash-ka faraha badan ee ay bankgiyada u heeystaan wuxuu fikirkiisa siiyey inuu basaaso u noqdo KGB.
Taariikhda waxaa ay werisay inuu ahaa nin lacag jecel, taasi waxeey fursada siisay sirdoonkii Midowga Soofeeti ee KGB-da oo ka faa’iideeystay daruufta la soo gudboonatay nin ay u arkayeen inuu iibsami karo xogtana laga heli karo. Waxeey ku qarqiyeen lacag uusan weligiis ku riyoon isagoo badalkeeda uu siinayo dhamaan macluumaadka ay doonayaan oo ah in xogta Qaranka dalkaasi iyo cida la shaqeeysa.
Wuxuu sidoo kale ahaa nin ku waalan cabida qamriga. Muddadii u la shaqeeynayey CIA-da wuxuu ku jiray nolol deganaan la’aan ah iyo mustaqabal mugdi ah. Wuxuu ku andacooday markii gacanta lugu dhigay ka dib in sirdoonka dowladiisa eeysan gacan siin markii uu baahnaa, taasina ay keentay inuu dhinaca kale u weecdo. Wuxuu adeegsan jiray magac been abuur ah oo ugu adeegayey danahaSoofiyeet-ka.
Xeeladaha kale oo u adeegsan jiray waxaa ka mid ahaa inuu marwalba muujin dacaadnimo iyo howl karnimo xad dhaaf ah oo uga dhex muuqday kooxda la xilsaaray soo xero gelinta baasiin la shaqeeya CIA-da oo Soofiyaat-ka u dhashay. Arrimahaasi waxeey keentay inaan laga shakin marnaba howlihiisa kale ee uu sida qarsoon ula shaqeeynayey KGB.
Wuxuu sii cabi jiray galaas qamri ah si uu noqdo nin dhiiran oo gudbin kara xogta laga rabo. Inta badan wuxuu ahaa nin aan ka dhamaan dhismaha safaarada Soofiyeet-ka ee Washington halkaasoo kula kulmi jiray madaxii sirdoonka KGB ee loo xilsaaray arrintiisa.
Muddo aad u dheer wuxuu ku mashquulsanaa xog arruurin la xirriirta basaasiinta Soofiyeet-ka ee CIA-da e ah basaasiin qarsoon. Wuxuu sida oo kale gudbin jiray howlgalada Washington ee qorsheeysan kana dhanka ah Mosko. Bishii abriil 16-keedii sanadkii 1985-tii ka hor intaan gacanta lugu soo dhigin waxaa ay taariikhdu sheegtay inuu saraakiishkii soofiyeet-ka ee ku sugayey dhismaha safaarada u dhiibay baqshad weyn oo ay ku jrtaan magacyo Ruush ah oo Mareykanka iyagana lacago ku iibsaday.
Wuxuu maalintaas abaal marin u helay lacag dhan konton kun oo doolar. Ragga loo soo gudbiyey sirdoonka Soofiyeet-ka ee ka tirsan KGB waxeey xukuumaddii Mosko ku noqotay naxdin, filan waaa iyo amkaag. Waxaa meesha ka soo baxay ragg magac iyo maqaam weyn ku leh agtooda oo noqday basaasiin u adeega cadowga. Dalalka Mareykanka iyo dalweynihii la oran jiray Midowgii Soofiyeeti waxeey labaduba caan ku ahaayeen ilaa iminkadan-ba ineey malaayiin doolar ku qarash gareeyaan shaqsiyaad ay u arkaan inuu midba midka kale u soo baasi karro.Soona arruurin karro xogta.
La soco qeybta labaad haddii Alla idmo.
Previous articleFederaalku midnimo Soomaali oo dib u curata ma horseedi karaa?
Next articleFederaalka Maqalnaye Ma La Inoo Fasiray?